Nin go`aansaday in muddo sanad ah hal shabaq uu kula dhex noolaado labo libaax - calanka.com
Nin go`aansaday in muddo sanad ah hal shabaq uu kula dhex noolaado labo libaax (Calanka.com) - Posted at 28/04/2013 By Fantastic
Alexander Pylyshenko oo ah mulkiilaha xero lagu xanaaneenyo xaywaanada dalkaas Ukraine ayaa shaaca ka qaaday in uu qorsheynayo in muddo sanad ah uu hal shabaq kula dhex noolaado laba libaax oo aad u waa weyn sida bogga Bodditycentral uu u sheegay .
Waxa uuna tilmaamay in arinkaan uu uga gon leeyahay in uu ku aruuriyo qarahaad tabarucaad ah si uu ugu dhiso xarun lagu xanaaneeyo libaaxyada .
Alexander Pylyshenko ayaa horay u dhigay rikoor sanadkii 2011-ka ka dib markii 35 maalin uu hal shabaq kula dhex noolaa laba libaax oo waa weyn xiligaas oo uu la qeybsanayay hilibka , waxa uuna xiligaas ka dhex sameystay shabaqaas suuli si uusan uga bixin .
Halkaan ka daawo muuqaal yaab badan oo ninkaan alcarabiya.com/
Waxaa la tilmaamayaa in xiligaas uu ujeedkiisa ahaa in sara loo qaado wacyiga daryeelka ilaalinta caafimaadka libaaxyada .
Alexander Pylyshenko ayaa internet-ka soo dhigay muuqaal isaga oo libaax shabaq kula jira waxa uuna tilmaamay in uu doonayo in uu alifo buug uu kaga hadlayo nolosha libaaxyada muddo sanad gudahood Calanka.com: Isha wararka xaqiiqda